एजेन्सी । कतिपयले भन्छन्, पर्याप्त आराम तथा निद्रा स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक छ । तर एक नयाँ अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ, धेरै सुत्नु वा दिनभर बसिराख्नु मानिसको स्वास्थ्यका लागि मदिरा तथा धूम्रपान सेवनभन्दा ४ गुणा बढी हानिकारक छ ।
दिनमा ज्यादा बस्नु, हलचल नगर्नु तथा एक रातमा ९ घण्टाभन्दा बढी सुत्नु मानिसको स्वास्थ्यका लागि निकै नै प्रत्युत्पादक हुन्छ ।
धेरै बसिराख्नु पर्ने मानिसहरुको चाँडै नै मृत्यु हुने सम्भावना शारीरिक श्रम गर्नेहरुभन्दा कैयन गुणा बढी हुन्छ । पछिल्लो केही वर्षमा भेटिएका यस्ता प्रमाणहरुले सावित गर्छन्, धेरै बस्नु मानिसको स्वास्थ्यका लागि निकै हानीकारक छ ।
धेरै सुत्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने कुरा त यसअघि गरिएका विभिन्न अनुसन्धानबाट नै पत्ता लागेको थियो । यसपटक सिड्नी यूनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरुले यो अध्ययन गरेका हुन् ।
युनिभर्सिटी अफ सिड्नीका रिसर्चर तथा लेखक डा. मेलोडी डिंगले भने, ‘जब तपाईं अभ्यास पनि गर्नुहुन्न, तपाईंको स्वास्थ्यमा तीनतर्फी मार पर्छ । हाम्रो अध्ययनबाट के पत्ता लागेको छ भने, जति हामी खानपानमा ध्यान दिन्छौं, त्यति नै ध्यान सुत्ने, बस्ने तथा व्यायाम गर्ने कुरामा पनि दिनु अति नै आवश्यक छ ।’
डा. डिंगसहित उनको टीमले ४५ तथा यसभन्दा बढी उमेरका २ लाख तीस हजार मानिसबीच यो अध्ययन गरेका थिए । यो अष्ट्रेलियन इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान हो ।
यसक्रममा अनुसन्धानकर्ताहरुले मानिसको आनीबानी, उनीहरुले गर्ने कामको प्रकृतिलगायत सम्पूर्ण पक्षको विश्लेषण गरे । अनुसन्धानमा पत्ता लाग्यो नियमित धूम्रपान गर्ने तथा मदिरा सेवन गर्नेहरुभन्दा शारीरिक श्रम र व्यायाम नगर्ने तथा बसिराख्ने र धेरै सुत्नेहरु निकै नै छिटो मृत्युको मुखमा पुग्ने रहेछन् ।
अध्ययनमा यो पनि पत्ता लाग्यो कि दिनमा ७ घण्टाभन्दा कम सुत्नु पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ, जति धेरै सुत्दा हुनेगर्छ । ७ घण्टाभन्दा कम वा ९ घण्टाभन्दा बढी सुत्नु स्वास्थ्यका लागि निकै नै हानिकारक हुने र अल्पायुमै मृत्युको सम्भावना पनि मदिरा सेवन गर्नेहरु भन्दा ४ गुणा बढी हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।